Chii chakananga kuMutengi (D2C)? | ECommerce nhau
Chii chakanangana neMutengi (D2C)?
Iyo D2C modhi inobvumidza zvigadzirwa kuti vavake hukama chaihwo nevatengi vavo vekupedzisira. Nekutengesa zvakananga kune wako wekupedzisira mutengi, iwe unogona kutaurira yako brand nyaya yakanangana navo. Pachivanhu, kana chigadzirwa chako chakasarudzwa kupfuura vakwikwidzi pawebhusaiti yemutengesi, unogona kunge wakakunda kutengesa, asi wakavaka hukama nemutengi iyeye?
Nhoroondo, mabhenji akatengesa kune vatengesi kana vamiririri vakachengetedza hukama nevatengi vavo. Izvi zvinoreva kuti rese rakakosha dhata pakutenga mafambiro uye zvakanyanya kudaro, huwandu hwevanhu hwakavanzwa kubva kumabhureki.
Iine email yemutengi kana kero yepanyama, iyo mhando inogona kupa yakawanda yakabatana kushambadzira ruzivo. Vatengi vanotarisira chiitiko chiri nani kupfuura zvavakaita kare.
1 Nongedza kuna Mutengi
2 Chiratidzo chekuita
3 Resource manejimendi
4 Tengesa zvigadzirwa
5 Musika wevatengi
Nongedza kuna Mutengi
Paunenge uchitengesa kune mutengesi kana wepakati, iwe une zvishoma zvishoma kutonga pane zvinoitika pakati pavo nemutengi. Chimwe chezvikamu zvakaomarara zvekuve chiratidzo chiri kugadzira zvigadzirwa izvo vateereri vako vachada uye vatenge. Kana iwe usina yakananga nzira yekutaurirana nemutengi wako, unokwanisa sei kuve iwe mukutanga zvigadzirwa zvitsva?
Hezvino zvinhu zvitatu zvekufunga usati watanga kutengesa pane ecommerce chikuva kana musika:
1) Kuwedzera mari dzevatengesi
Paunenge usiri mukutonga kwenzvimbo yako yekutengesa, kune mari uye mari yausingakwanise kusarudza kana kufuratira. Zvimwe zvakavanzwa, zvimwe zvakavanzika, zvimwe ndezvezvibhadharo, nepo zvimwe zvinongoburitswa chete kana zviitiko zvacho zvave pedyo nekupera. Paunotanga kupfupisa mari dzese, mubhadharo uye muripo iyo e-commerce chikuva inogona kubhadharisa, iwe uchaona kuti iwo anosvika kuchikamu chakakura chemari yako yekutengesa. Kana iwe ukawedzera kutumira uye kuzadzikiswa, iwe urikutsvaga chikonzero chakaringana kufunga imwe nzira.
2) Kutungamira kwenzvimbo dzakawanda dzekutengesa
Iwe unogona kunge uchitengesa kuburikidza nenzira dzakawanda senge ecommerce mapuratifomu, webhusaiti yako, vatengesi, kana zvidhinha uye zvitoro zvezvitoro. Kugadzirisa kutengesa munzira dzakasiyana kunogona kunetsa sezvo imwe neimwe ichiuya nezvinodiwa zvakasiyana uye inogona kuisa kushushikana pane zviwanikwa maererano nenguva, kuyerera kwemari, kuverenga, kugadzirisa, kana kutumira. Kusava neyako yekutengesa maitiro kunewo njodzi, sezvo chero zvikanganiso kana matambudziko akasangana mune dzimwe nzira anogona kukanganisa mukurumbira we brand uye kugutsikana kwevatengi. Kubva kunze, zvinoita sekunge makambani ane humambo hune simba hunotengesa zvigadzirwa zvavo; zvisinei, nzira yakawanda-chiteshi inogona zvakare kudzikisira mucherechedzo uye nemabatiro ainoita nevatengi.
3) Iko makwikwi ari padyo zvakanyanya kuti agadzikane?
Kuvapo mumapuratifomu makuru kana misika zvaizoreva kutengesa pamwe chete nevakwikwidzi, izvo zvinogona kubatsira hunhu hwechigadzirwa kukunda vamwe, asi zvinogona zvakare kuve njodzi kana yakaderera kana kutsiva shanduro dzatengeswa pawebhusaiti imwechete. Iyi yekudzosera inofanirwa kutariswa kana chigadzirwa chako chisingakwanise kumira nyore, sevatengi vangori batani rimwe chete kubva pane inotevera sarudzo.
Zvinogona kutaridzika kunge nguva yakawandisa uye kushandisa zviwanikwa, asi kuve neyako chitoro chepamhepo chirongwa chenguva refu chekumisikidza yako wega dijitari mhando muridzi pane inogara ichikura internet. Kuva newebsite yepamhepo hakusi kungoisa zvimisikidzo kana hwindo kuchitoro chako chedhijitari, iri nzira zhinji yekuendesa zita rako rese uchishandisa zvinhu zvekugadzira, ruzivo rwevashandisi, kudyidzana kwevatengi uye kubatana kuti unyatso kuwedzera kuvapo kwebhizinesi rako. uye tora mukana wehukama hunowanikwa nevatengi nekara rako. Chaizvoizvo, D2C inogonesa mucherechedzo kuti uenderere mberi nekutonga zvaunoda, kugadzirisa kusangana kwayo nevatengi, uye kuchengetedza kuzvitonga kwakakosha pakati pevezera rayo paInternet.
Kutengesa kuburikidza neako wega chitoro chepamhepo zvakare kunopa kumwe kutonga pamusoro pemahara ako nekubvisa. Pakave neshanduko inoshamisa munzira iyo mamwe marangi anosvika kune vatengi vavo. Panzvimbo pekushandisa vatengesi kana vatengesi, zvigadzirwa zvinoenda zvakananga kumutengi zvinotengesa zvakanangana nekupedzisira mutengi.
Kuchinja kwesimba kwakakanganisa vatengesi vechinyakare, asi panguva imwe chete mamwe emakambani ane hunyanzvi uye akabudirira mumakore gumi apfuura akaberekwa musangano iri. Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti nei makambani achienda akananga kumutengi kuitira kuti bhizinesi rako rigone kuvaka rakabudirira brand.
Kwakave nemazuva apo hofori yemutengi yakarongedzwa zvinhu (CPG) makambani uye madhipatimendi madhipatimendi akatonga pamusika, nekutarisisa kwavo kwakanyanya pane zvekutengesa manejimendi uye zvakanakira kuve wekutanga kuuya.
Tsika yemazana emakore yeCPG - yaive yakavakirwa pakutsvaga kugona pakati peanopa, mugadziri, mutengesi, mutengesi nemugovera - izvo zvaimbo shongedza korona dzemusoro wemabhizimusi seNike, Pepsi-Cola, Unilever uye P&G, zvishoma uye zvishoma zvine basa. Maitiro ekutengesa akadhura, anoderera pane mapato echitatu, anotarisisa kushambadzira kwakananga uye akagadziridzwa kune mutengi wekupedzisira.
Kutsiva ma banner ekare chibage chitsva chemakambani anononoka uye akakodzera ayo akagadzirira zvirinani kuti abudirire mu 2019 mutengi-centric, data-centric musika wevatengi.
Zvakananga-kune-vatengi zvigadzirwa, zvinowanzo kunzi D2C kana DTC, zvakadzinga zvekare-chikoro chekutengesa cheni mafungiro uye kuvimba kune yechitatu-bato kugovera.
Muchidimbu, iyo D2C modhi inoreva kuti sebhizimusi, unotengesa zvigadzirwa zvako zvakananga kumutengi, uye mukuita izvi, kuenda wakananga kunovandudza ruzivo rwevatengi, kunatsiridza izwi rechiratidzo chako, uye iwe unodzora dzinenge dzese mafambiro evatengi. ..
Direct-kune-mutengi kutengesa haana hanya neyakajairwa tsika. Iwo makambani akafunga kucheka wepakati murume, vatengesi nevanozvigovera uye pachinzvimbo vakashandisa simba regore uye kusimuka kwe e-commerce kutengesa zvigadzirwa zvavo zvakananga kugumisa vatengi.
Kana iwe uchigona kufungidzira chigadzirwa chitsva, kuchigadzira, kuvaka webhusaiti, uye kuita kuti vanhu vatenge iyo, iwe unogona, mumwedzi yakati wandei, fungidzira mutengi mutsva, kuvhura chigadzirwa, kudzora nhoroondo yechiratidzo, uye kuvaka chiratidzo .Miriyoni emadhora D2C brand kubva pakutanga.
Direct-kune-vatengi mabhizinesi anowanzove akati wandei (kana asiri ese) eaya maitiro masere:
Ivo ndivo vatangi vechidziro chakadzika kupinda indasitiri.
Ivo vanochinjika maererano nehukuru uye / kana vanogona kukweretesa uye kubvarura chikamu chezviitiko.
Ivo vanonyanya kufarira nezvevatengi vavo.
Ivo vane yekutanga-ruoko data leveraging uye analytics ruzivo.
Ivo vanopedza vamiririri kuti vakwanise kutumira zvakananga kune vatengi.
Ivo vanonzwisisa kukosha kwekutaurirana zvakananga nevatengi (uchishandisa CRM software).
Ivo vane yakawanda mutengo wekuchinjika kupfuura echinyakare vatengesi.
Ivo vanoratidzira kuwedzera kwekushandisa kwekushambadzira kwedhijitari (kunyanya email uye zvemagariro media).
DNVB ikambani ine tarisiro yakasimba pamusika wevatengi yainoshandira uye nerwendo rwevatengi rwepamhepo, uye ine zvimiro zvakawanda zvekugovera. Iko kushandiswa kwekutengesa chaiko kunogonesa aya maratidziro evatengi kumisikidza hukama nevatengi uye nekuvapa iwo zvigadzirwa uye masevhisi ayo mutengi anotarisira, izvo pakupedzisira zvakare zvinoreva chiitiko chiri nani. Kusiyana nemutengesi wechivanhu kana e-commerce mutambi, DNVB inoberekerwa muzera redhijitari, ichisimbisa ruzivo rwevashandisi, kupokana neyakajairika yekutenga ruzivo, uye kugadzira zvinomanikidza zvemukati sechikamu chakakosha chechitoro chayo chekutengesa.
Bvisa murume wepakati
Paunobvisa mabhizinesi akasiyana siyana anomira pakati pako nemutengi wako, iwe zvakare bvisa izvo zvinhu zvinotora mugove wepundutso yako. Semuenzaniso, kana bhizinesi rako richitengesa maT-shirts, uye iwe uchida kutengesa izvo zvigadzirwa kuburikidza nevazhinji vatengesi uye vatengesi, uchafanirwa kuzvitengesa nemutengo wakaderera zvakakwana kuti vazozvitengesa zvakare vozvitengesa zvakare kune vatengi. Izvo zviri kudya yako purofiti margin, inova chiyero chebatsiro rako maererano nemutengo wezvinhu zvako, unoratidzwa sepesenti. Iko kukosha kwehupenyu kweumwe neumwe mutengi kunenge kuri kushomeka pakati pevamiririri vaunofanira kubhadhara kuti uwane chigadzirwa chako chibude munyika.
Zvirinani batanidza nemutengi wako
Kana iwe uchivimba nemamwe makambani, vagoveri, uye vatengesi kuti vatengese chigadzirwa chako, urikushaiwa pane yakawanda data iyo inogona kuve yakakosha kune yako brand. Muchokwadi, data revatengi rave imwe yezvinhu zvakakosha kwazvo zvemadhijitari emuno mabhurani.
Ngatitii iwe uchiri kutengesa iwo ma-t-shirts kuburikidza nemutengesi. Ruzivo chete rwaungangowana kubva kuchitoro chebazi uko ako t-shirts anotengeswa anoenderana neinowanikwa: vhoriyamu yakatengeswa, vhoriyamu yakadzoserwa, uye kudiwa kweramangwana. Izvo zvingave zvakanaka kune yekuverenga manejimendi, asi haina kukuudza zvakawanda nezve ako vatengi.
Ngatiti iwe uri kutengesa iwo iwo iwo mahembe kuburikidza newe wega webhusaiti. Une mukana wekupa mumwe wevatengi vako nezvimwe zvigadzirwa pakubhadhara (kutengesa-kutengesa uye upsell) kuti uzive kuti ndezvipi zvigadzirwa zvinogona kufamba zvakanaka nema t-shirts avo aripo.
Iwe une mukana wekuyedza mitengo yako kuti uone kana iwe uine nzvimbo yekuchaja yakawanda, kana kana iwe uchikwanisa chaizvo kutengesa mamwe mahembe kana iwe ukadzikisa mitengo. Iwe unogona email kutumira kwekutevera-up kuongororwa kune ako vatengi kuti vazive kana vaifarira hembe, kana chinhu chacho chakaunzwa nenguva, uye kana chikazadzisa zvavanotarisira.
Kana iyo hembe ikadzoserwa, iwe une yakawanda yekukanzura matekiniki ayo anogona kukubatsira iwe kuti uone chaizvo izvo zvakakanganisika, saka iwe unogona pakupedzisira kupa chigadzirwa chiri nani kune vatengi vako mune ramangwana uye kugadzira chiitiko chiri nani. Uye pakupedzisira, iwe une mukana wekutumira anoteedzera-maemail ayo anobvunza vatengi nezve akasiyana mavara, saizi, uye masitaera e t-shirts kuti akubatsire kukutungamira iwe kuburikidza nekugadzirwa kwechigadzirwa.
Wedzera mindhare nekukurumidza
Mune yechinyakare yekutengesa modhi, kana iwe waida kuti t-shirts yako ive yerudzi chiratidzo, kana yepasirese brand, iwe unofanirwa kunyatso fanidzira kune vatengesi kuti yako inventory inogona kufamba.
Zvinogona kutora makore mashoma kuti uratidze kuti iwe wakasimbisa kuvapo kwenzvimbo kana kwedunhu, uye ipapo uchafanirwa kutsvaga vagoveri venyika. Izvo zvakafanana zvinogona kutaurwa nezvekuvapo kwenyika dzese - kuratidza kubudirira, tsvaga hukama hutsva, uye wedzera - sukurudza uye dzokorora. Zvinogona kutora makore (kunyangwe makumi emakore) kutanga kuwana kuvimba kwevatengi vako.
Mune iyo D2C modhi, unogona kudzikisa yako nguva kumusika nekuti urikucheka vese middlemen ataurwa pamusoro. Paunongotanga webhusaiti yako uye chigadzirwa chako chiripo, unogona kutengesa nechero kupi (sekureba sekugona kwako kutumira).
Kwemakore, Gillete akatonga musika wemazamu evarume, asi nekuvhurwa kweDollar Shave Club muna2011 uye yaHarry muna2013, iro bhizimusi remabhiriyoni emadhora rakachinja. Gillete akanzi ane dzinosvika 70% yemusika mugove muna 2010, uye nhasi, yave pedyo ne50%. Ndiro simba rekuwedzera kubatikana kwepfungwa padigital digital.
Chengetedza yako brand brand
Paunotumira iwo mahembe ako kumutengesi wechitatu, kana kutanga kukumbira vatengesi kuti vatengese iwo iwe, urikupa iko kudzora kwechako. Zvinogona kunge zvisingaite senge panguva iyoyo, asi zvishoma nezvishoma, iwe uri kuisa kutonga kwekushambadzira mumaoko eimwe kambani.
Zvitatu zveana Ps zvekushambadzira - mutengo, kukwidziridzwa uye kuiswa - zviri zvakananga mukutonga kwako kana iwe uine yakananga-kune-mutengi chiratidzo.
Unogona kuyedza mutengo weA / B, unogona kuwedzera, kudzikisa kana kuita chero chaunoda nemutengo wako zvichienderana nehupfumi hwekambani yako (maringe nekuita izvo zvinoshanda kune vatengesi kana nzvimbo dzekuparadzira).
Iwe unogona kupa kukwidziridzwa kunoenderana neyako wega mutengi dhata uye kudzora kwekutengesa kuyerera uchishandisa dzakasiyana nzira dzekutengesa. Uye, chigadzirwa chinovhurwa uye chinotengeswa pawebhusaiti yako, kuti uzive kwachiri kuiswa, maratidzirwo ainoitwa kumutengi, uye kuti (netarisiro) inoonekwa sei.
Iva pese pese, nguva dzese
Kana chigadzirwa chako chikaenda kuburikidza necheni yekupa cheni, iwe unovimba zvakanyanya pane mashoma makuru maresitoreti kutengesa chigadzirwa chako. Kazhinji nguva izvo zvinoreva kusarudzika zvibvumirano uye nemitengo mishoma kuchinjika. Ngatitii uri kutengesa ako t-shirts kuburikidza nenzvimbo yekutengesa, uye iwe unoda kupa inokurumidza kutengesa.
Zvingangodaro, iwe unogumira pane zvaunogona kuita. Kana kuti ko kana iwe uchida kuyedza beta chigadzirwa chitsva uye uwane mhinduro pakarepo kubva kune vatengi vako? Zvingangodaro, nzvimbo imwechete iyoyo haidi kutengesa batch diki yechigadzirwa chavo chitsva.
Kuve D2C zvinoreva kuti iwe unogona kudzora chigadzirwa chako kuburikidza neako akasiyana "push kana dhonza" matekiniki ekushambadzira. Izvi zvinosanganisira yako webhusaiti uye kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana dzaunotengesa. Iwe haugone kushandisa kwete yako webhusaiti chete, asiwo yemagariro midhiya chiteshi, email macampaign, nezvimwe.
Mazhinji maD2C mabhii anoshandisa imwe nzira yeCRM software kana chikuva kuti vatore 360 ​​degree kuona kwevatengi vavo (uye vangangove vatengi) uye kutaurirana nevatengi vavo musika (dzimwe nguva) zuva nezuva.
Kudyidzana nemutengi kungori bhatani kure, uye hapana chekumisa iwe kuti utaure navo, zvingave zvekutengesa kana zvevatengi. Vatengi ikozvino vanotarisira kuti chiito nekukurumidza chiitwe kana vaine dambudziko, uye kana vachigona kupindurwa nekukasira, zvinofanirwa kugadzira ruzivo rwevatengi zvirinani. (Kunyange mamwe makambani epamberi enhaka ari kutora izvozvi. Mugore rapfuura chete, ndanga ndine nyaya mbiri nesangano rezvemari uye ndakagadzirisa nyaya iyi kwete kuburikidza neyakajairwa rutsigiro rwevatengi, asi kuburikidza neTwitter. Uye yaive gumi. times nekukurumidza).
Kuva D2C kambani hazvireve chete kuti uri dijitari, uye hazvireve kuti uri mutengesi-chiteshi mutengesi (kutengesa pane dzakawanda dhijitari chiteshi). Zvinoreva kuti iwe unogona zvakare kuve omnichannel mutengesi, kutora mukana kune ese ari maviri madhijitari ekutengesa nzira uye epanyama nzvimbo dzekutengesa. Zvinogona kunge zvisingaite senge panguva iyoyo, asi zvishoma nezvishoma, uri kuisa kutonga kwekushambadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Chii chakanangana neMutengi (D2C)?
Matipi ekutevedzera mutemo mutsva wekusaina kubasa